Knowledge – The Word
သင့် အိမ်ဟာ မည်သည့်ဘက်ကို မျက်နှာမူနေပါစေ အသက်ရှည် အနာမဲ့စေဖို့ ဒီအချက်တွေ အတိုင်း အိပ်စက်ပါ…’”
သင့္ အိမ္ဟာ မည္သည့္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူေနပါေစ အသက္ရွည္ အနာမဲ့ေစဖို႔ ဒီအခ်က္ေတြ အတိုင္း အိပ္စက္ပါ မိမိကိုယ္မိမိ အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ေစလိုလွ်င္ လူတို႔ ဦးေခါင္းထားၿပီး အိပ္စက္ရာ အရပ္သည္ မွန္ကန္ဖို႔လို…! ေရွးကလူႀကီး မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေနရမည့္အိမ္ ေဆာက္လုပ္ ရာတြင္ မည္သည့္ အရပ္ကို မ်က္ႏွာျပဳ ရသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားစင္
လူတစ်သိန်း ကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှသည့် ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်း
လူတစ်သိန်းကိုကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှသည့် ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည် ဘုရားရှိခိုးနည်း တစ်ကြိမ်ဘုရားရှိခိုးလို့ရှိရင် လူတစ်သိန်းကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှတဲ့ ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်းရှိတယ်။ ဘယ်လို ဘုရားရှိခိုးမလဲဆိုတော့…. မမြဲသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါန်းပါ၏ ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)၊ ဆင်းရဲသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသော